घरेलु फुटबल अर्थात अस्थिरताको पर्याय ! | Hamro Khelkud
रियल बसाई खराब नरहेको हामेसको बुझाइ
क्लबको कीर्तिमानी मुल्यमा डियास सिटीमा अनुबन्धित
लिभरपुलका थियागोलाई कोरोना संक्रमण
अपराजित गेटाफे ला लिगाको शीर्षस्थानमा
चेल्सीमाथि टोटेनहमको जित
राशिदको घातक बलिङसँगै दिल्ली पराजित
घरेलु फुटबल अर्थात अस्थिरताको पर्याय !
शुक्रबार, पुस ४, २०७६
प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं
घरेलु फुटबल बजार समयसँगै अस्थिर बन्दै गइरहेको छ । हरेक वर्ष कुन खेलाडी कुन क्लबमा खेल्छन् अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । खेलाडी आफैं पनि त्यसको जवाफ दिन सक्दैनन् । घरेलु फुटबलमा एकरुपता नहुनु मुख्य कारण भएपनि क्लबहरुले लिगअघि मात्र तदारुकता देखाउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
मछिन्द्र क्लबले यसपटक बलियो टोली बनाउने प्रयासमा प्लेइङ सेटका लागि मात्र होइन बेन्च खेलाडीमा समेत अटाउने गरि नाम चलेका खेलाडी भित्र्याएको छ । अघिल्लो सिजन मात्र ए डिभिजनमा डेब्यू गरेको च्यासल युथ क्लबले राष्ट्रिय टोलीका नियमितसहित केहि खेलाडी अन्य ठूला क्लबबाट अनुबन्ध गरेको छ । च्यासलबाट लिग खेल्नको लागि नै भनेर जापानबाट फरवार्ड सन्तोष साहुखल स्वदेश फर्केका छन् । उनले साथमा ३ जापानी खेलाडी पनि ल्याएका छन् ।
वर्षौसम्म मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको जर्सीमा देखिएका बिताएका सुजल श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ, हेमन गुरुङ, विशाल राई, विराज महर्जनलगायतले यो वर्ष एकै पटक क्लब छाडे र मछिन्द्रको यात्रा तय गरे । रुस्लान थ्री स्टारबाट धिमाल दाजुभाइ रञ्‍जित र विजय मछिन्द्र पुगे । च्यासलबाट देवन्द्र तामाङ र योगेश गुरुङले पनि मछिन्द्र नै रोजे । उता थ्री स्टारका सुनिल बल र एलेन न्यौपाने भने च्यासल गए ।
राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङ आफ्नो सुरुवाती क्लब ब्रिगेड ब्वाइज क्लब फर्किए भने राष्ट्रिय खेलाडी रन्जन विष्टले मनाङको बाटो तताए । राष्ट्रिय टोलीबाट लामो समय खेलेका विंगर जगजित श्रेष्ठ पनि मनाङबाट लिग खेल्न अष्ट्रेलियाबाट केहि समयका लागि स्वदेश फर्केका छन् । यसबीचमा केहि खेलाडी भने लिगमा अनुबन्धित नभई मोफसलको फुटबलमा नै व्यस्त देखिएका छन् ।
खेलाडीलाई लामो समय सम्झौतामा राख्ने परम्परा नेपालमा अझै विकास भइसकेको छैन । त्यसका बाबजुद पनि मनाङ र थ्री स्टारमा भने खेलाडीहरु अन्य क्लबको दाजोमा लामो समय बसेको अनुभव छ । तर, यो वर्ष आइपुग्दा परम्परागत बलियो मानिएका दुवै टोलीमा नयाँ खेलाडीको बाहुल्यता देखिएको छ । त्यसअर्थमा पनि अब घरेलु फुटबलमा परम्परागत टोलीकै बोलबाला रहन्छ नै भन्ने अवस्था छैन ।
विगतमा विभागीय टोलीमा अनुबन्धित भएपछि खेलाडीले करिअर सुनिश्चित भएको आभास गर्दथे । उमेर रहुन्जेल फुटबल खेल्ने र खेल जीवन सकिएपछि सरकारी जागिरमा पेन्सन पकाउने, त्यसैले पनि अघिल्लो जमानाका धेरै खेलाडीको करिअर पुलिस र आर्मीमा टुंगिन्थ्यो । एपीएफको आगमनले अझ खेलाडीहरुलाई अर्को विकल्प दिएको थियो । तर, पछिल्लो समय विभागीय टोलीबाट जागिर नै छाडेर अन्य क्लबमा अनुबन्धन हुनेको लर्को नै लाग्न थालेको छ ।
जावलाखेलले यसै सिजन पुलिसका हरि कठायत र एपीएफका रुपबहादुर लामालाई अनुबन्धित गर्यो । अघिल्लो सिजन पुलिसबाट लिग खेलेका दीनेश राजवंशीले लिग सकिएपछि जागिर नै छोडेर थ्री स्टारबाट मोफसल फुटबल खेले । उनले लिगका लागि च्यासलसँग अनुबन्धन गरे । राष्ट्रिय टोलीका नियमित डिफेन्डर रहेका आदित्य चौधरी एपीएफ छाडेर मनाङसँग जोडीए । एपीएफका भरपर्दा मिडफिल्डर राजेन्द्र रावल पनि यो सिजन संकटा पुगेका छन् । विभागीय टोलीबाट अन्य केहि खेलाडीले पनि छाड्ने हल्ला चलेपनि उनीहरुको प्रक्रिया भने विभागको अडानले गर्दा सफल हुन सकेन ।
मनाङ र थ्री स्टार अघिल्ला सिजनमा उपाधि दाबेदार टोलीका रुपमा गनिन्थे । यसपटक पनि क्लबले आफैंलाई उपाधि दाबेदारको रुपमा रहेको बताइरहँदा मैदानमा भने बिल्कुल फरक देखिन्छ । टोलीमा नाम चलेका खेलाडी छैनन्, र पहिलो खेलको प्रदर्शन हेर्दा सिमित नाम चलेका खेलाडीले उपाधि दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने हो भने निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । बेन्चमा मात्र होइन, यसपटक यी दुई टोलीको सुरुवाती रोजाईमा नै ए डिभिजनमा ‘डेब्यू’ गरिरहेका खेलाडी छन् ।
कतार एयरवेज सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग गत साताबाट सुरु भइसकेको छ । सहभागी १४ मध्ये ४ टोलीले २ खेल खेलिसकेका छन् भने १० टोलीले समान १ खेल खेलेका छन् । अहिले नै टोलीको नजिताका आधारमा कसले जित्दा भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । तर, पनि विहानले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै केहि क्लब बलियो रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । त्यसमध्ये मछिन्द्र र च्यासल पर्दछन् । दुवैले शुक्रबार मात्र एक अर्कासँग खेल्दै अंक पनि बाँडे ।
नयाँ सिजनमा खेलाडी अनुबन्धन गरेको आधारमा पनि यी दुई टोलीले परम्परागत दाबेदारलाई चुनौति दिने सम्भावना छ । मछिन्द्रले बिबिसीलाई र च्यासलले संकटालाई हराउँदै जितका साथ लिगको सुरुवात गरेका छन् । ती बाहेक मनाङ, आर्मी र एनआरटीले पनि विजयी सुरुवात गरेका छन् । तर, परम्परागत दाबेदारका रुपमा रहेको थ्री स्टार क्लबले बराबरीका साथ यात्रा सुरु गरेको छ । दशक अघि लिगको नियमित दाबेदार पुलिसले पनि यसपटकको सुरुवात बराबरीबाट नै गरेको छ ।
कम्तिमा लिगका आधा खेल (४५) खेल नहुँदा सम्म अहिलेको टोली को कत्ति बलियो छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । यत्ति हो की राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको बाहुल्यताका आधारमा मछिन्द्र र च्यासल यसपटकका नयाँ दाबेदारका रुपमा मान्न सकिन्छ । आर्मीले पनि यसपटक उपाधिको खडेरी तोड्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
लिग कस्तो बनाउने भन्नेमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को प्रष्ट योजना अझै देखिन्न । परम्परा धान्ने बाहेक लिगमा दर्शकको आकर्षण बढाउन सकिएको देखिदैन । ४ वर्ष पछि दशरथ रंगशालामा फुटबलको रौनक त फर्कियो , तर दर्शकलाई त्यसले तान्न सकेको छैन । लिगको पहिलो चरणका खेलमा दर्शकको उपस्थिति हेर्ने हो भने उत्साह जनक छैन ।
किन लिगप्रति दर्शकको रुची घट्दै गएको छ भन्नेमा एन्फाले न सर्वेक्षण गरेको छ , न त लिगमा नयाँपन दिने कुनै प्रयास गरेको छ । ए डिभिजन लिगका चर्चित क्लब भिड्दा असन, इन्द्रचोक, ठमेल सुनसान हुन्थे भन्ने दृष्टान्त अब घरेलु फुटबलमा कथा भइसकेको छ । क्लबहरुले पनि समर्थकहरुलाई मैदानसम्म तान्न कुनै कसरत गरेको देखिंदैन ।
दशक अघिसम्म पनि मनाङ, थ्री स्टार, पुलिस र आर्मी, यी चार टोलीबीच हुने प्रतिस्पर्धालाई निकै चासोका साथ हेरिन्थ्यो । लिग आयोजना र पद्दतिमा देखिएको अस्थिरता पनि सम्भवत यसको आकर्षण घट्नुको कारण मध्ये पर्दछन् । घरेलु फुटबलमा सानो विवादले लिग रोकिने मात्र होइन आयोजनामा पनि एक रुपता छैन । कहिले राष्ट्रिय लिग, कहिले सुपर एट, कहिले सुपर सिक्स त कहिले विना रेलिगेसनको लिग । लिग पद्दतिमै देखिएको अस्थिरताले लिगमाथि दर्शकहरुको विश्वास र आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको छ ।
अर्को क्लबहरुमा पनि लिग प्रतिको आकर्षण विगतमा जस्तो देखिन्न । तयारीका लागि २० लाख, हरेक खेल जित्दा ५० हजार रुपैयाँ त राखिएको छ त्यति हुँदा पनि क्लबहरु अहिले पनि धानिने अवस्था छैन । केहि क्लबको आम्दानी राम्रो भएपनि बाँकी भने ऋणमै चल्नु पर्ने बाध्ययता छ ।
ऋण तिर्न कठिन भएर एनआरटीले ए डिभिजनको आफ्नो हैसियत नै छाडेको केहि वर्ष अघिको मात्र घटना हो । यद्दपी पछि क्लब पुन शीर्ष लिगमा फर्कन सफल भएको थियो ।
अहिले पनि क्लबहरुको भनाई मान्ने हो भने एउटा औसतको टोली बनाउनका लागि १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था छ । लिग नै जित्ने क्लबले पनि पुरस्कार वापत ५० लाख रुपैयाँ मात्र पाउने अवस्था छ । लिगको पहिलो, दोस्रो स्थान आउने क्लबले प्रायोजक पाउने अवस्था बनेमा कम्तिमा खर्च सम्म उठाउने अवस्था बन्न सक्छ । बाँकी क्लबले ऋण बोक्नु पर्ने अवस्था छ ।
मछिन्द्रकै उदाहरण हेर्ने हो भने क्लबले यस सिजन २ करोडमाथि बजेट रहेको बताएको छ । जसमा खेलाडी अनुबन्धनमा मात्र १ करोड खर्च हुने क्लबको दावी छ । अन्य क्लबमा पनि कुल खर्च १ करोड हाराहारीमै आउला । क्लबका केहि सिमित सदस्यले सहयोग स्वरूप उठाएर एक सिजन त क्लब चल्छ होला, तर दिर्घकालिन निकासका लागि भने पहल हुन सकेको छैन । वर्तमानको समस्या सुल्झाएर भविष्यबारे बिल्कुल चिन्ता नलिने परम्परा नै बसेको छ ।
कुनै समय थियो । फुटबल पनि सामाजिक कार्य जस्तै मानिन्थ्यो । अहिले परिस्थिति बदलियो, तर एन्फाको मानसिकता बदलिएन । फुटबल खेलेर क्लब बाच्ने अवस्था नबन्दा सम्म क्लब फुटबलमा लगानी पनि बालुवामा पानी हाले सरह नै हुनेछ । क्लब बाचे मात्र त्यसले खेलाडी बचाउन सक्छ । स-साना आन्तरिक विवादले समेत प्रभावित हुने नेपाली फुटबलमा दिल खोलेर लगानी गर्ने र त्यस वापत नाफा कमाउने अवस्था नबन्दा सम्म नेपाली फुटबलले यथास्थितिबाट माथि उठ्न सक्दैन । एन्फाले फुटबललाई व्यावसायिक बनाउने पक्ष त कागजमा नै सिमित हुने डर बढेको छ ।
छिमेकी भारतले नै लिगलाई आकर्षण बनाउनका लागि पछिल्ला केहि वर्षमा गरेको प्रयास र त्यसको फलस्वरुप आईएसएलको सफलताबाट पनि एन्फाले केहि सिक्न आवश्यक छ । नत्र, लिग फुटबल परम्परा धान्ने फगत एउटा प्रतियोगिता हुनेछ, फुटबल विकासको मेरुदण्ड हुने छैन ।
बुधबार, अशोज १४, २०७७
शरदचन्द्र शाह – नेपाली खेलकुदका पथ प्रदर्शक
कम आशामा निरन्तर अघि बढेको भलिबल यात्रा
दिल्लीलाई हैदराबादको प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य
टोनी क्रुस दुई साता मैदान बाहिर
दिल्ली टस जितेर फिल्डिङमा, विलियम्सन र इशान्त टोलीमा
गौतम बुद्ध रंगशालालाई भरतपुर महानगरको ५० लाख